“အတွေးစလေးတွေ”: ဗိုလ်ချုပ်ကို မလွမ်းနဲ့ . . .
ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် အသက်ပေးသွားတာ...ငါတို့တွေ ပုံတော်သလို စိတ်ဓာတ်အညံ့စားတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်ညှိုးထိုးပြီး အောက်တန်းစားတွေ ဖြစ်အောင်လား...ကိုယ်ကျိုးဘဲကြည့်တဲ့ ငို့ဘသမားတွေ ဖြစ်အောင်လား...ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် အင်မတန်မှ စက်ဆုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လုပ်စားဖို့လား...စဉ်းစားသင့်ပြီ...
ငါတို့တစ်တွေ နိုင်သလောက်၊ စွမ်းသလောက် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူ...ဆိုက်ကားသမားကလည်း ကိုယ့်ဖောက်သည်အပေါ် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေး...ဈေးသည်ကလည်း ကိုယ့်ဈေးဝယ်အပေါ် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေး...ဆရာတွေကလည်း ကိုယ့်တပည့်တွေအပေါ် အကောင်းဆုံး တာဝန်ကျေ... အရှင်းဆုံးပြောရရင် တိုင်းပြည်မှာ ရှိသမျှလူအားလုံး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေအောင်ကြိုစားပြီး သူများကို ထိုးနေတဲ့ လက်ညှိုးတွေကို အသာဘေးချလို့ အကောင်းဆုံး မကြိုးစားသရွေ့ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်တယ်...လွမ်းတယ်လို့ မပြောဘဲ နေကြစို့လား...။ ။
Posted by Han Kyi at 12:54:00 pm
ဟုတ်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေကျေပွန်ပွန်ယူနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဘာမှ အဆင်မပြေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ကိုလည်း သတိရလွမ်းဆွတ်သလို၊ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းလည်း ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ...။ အခုတော့ အလုပ်ထက် အပြောက များနေတာတော့ အမှန်ပဲ..
စကားလုံးတွေပီပြင်လွန်းလို့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထင်ဟတ်မိစေတယ်. ဒါကြောင့် ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ဝဲမိရတယ် ဆရာဟန်ရေ
ဗိုလ်ချုပ်လို လူမျိုးတော့ မတွေ့ဖူးတာအမှန်ပါ.
ရာထူးရှိပေမဲ့ အခွင့်အရေးမယူတတ်တာ ခုခေတ်လူတွေနဲ့တော့ အကွာသားနော်
ခုခေတ်များ ရာထူးသေးသေးရရင်တောင် အခွင့်အရေးက များများယူချင်ကြတာ.
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ရှာမှရှားတဲ့ အာဇာနည်ပါ
ဒီပိုစ်ကတော့ ရာနှုန်းပြည့် အနှစ်သာရတွေ ရှိတဲ့ပိုစ်ပဲ ဆရာရေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူး၊ တွေ့ဖူးနေတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ဆရာပြောတာတွေ အားလုံးအမှန်တွေချည်းပဲမို့။
ဆရာရေ ဆောရီးနော် မှားသွားလို့။ "ထူးခြားတွေ့ကြုံ အဖုံဖုံ" မဟုတ်ဘူး။ "တောက်ပကြယ်စင်" ပါ။
မနက်ကတည်းက ဖတ်ပြီးခဲ့တာ အလုပ်ကိုပြေးရတာမို့
အခုမ comment လာရေးတာ ဒါကလည်း တော်တော်ကလေးကို ရေးခြင်လို့ပါ။
ဆရာ ရေးခဲ့တာရော ပြောခဲ့တာရော သိပ်သဘောကြတာ
ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆရာ့ပို့စ်ထက်ရှည်သွား မယ်ထင်တယ် ဆရာ ပြောသလိုပါပဲ ငို့ဘ တွေများနေကြ
တာ ဘာတဲ့ဆို ဟိုအပြစ်တင်ဒီအပြစ်တင်ပေါ့ ကိုယ့်ဖာသာကို လက်တွေ့ကျကျ ကြတော့ ဘယ်သူမှလုပ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်ကူးတွေယဉ်
မျှော်ကိုးနေတဲ့သူတွေလေ ဘာမှမလုပ်ပဲ စိတ်ကူးတွေနဲ့ မျှော်လင့်နေလို့ကတော့ ရေတောင်သောက်လို့မရဘူး ဒါကိုများ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ချီပြီးပြောခြင်နေကြ
သေးတယ် အဲဒီလက်နဲ့ အဲဒီပါးစပ်တွေက စာမတတ် ပေမတတ်နဲ့ ယာခင်းထဲမှာ ပေါင်းသင်နေတဲ့ လက်လောက်ကို တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးမ၀င်ဗျာ။
တော်ပြီ ဆရာရယ် ကျွန်တော်ဒေါသတွေထွက်နေပြီ။
မှန်လွန်းလို့ ပါ ဗိုလ်ချုပ်ပြော တဲ့ ဖာ နိုင်ငံ တော့ ဖြစ်မဖြစ်မသိဘူး
သူတောင်းစားနိုင်ငံ နဲ့ သူ များနိုင်ငံ မှာကျွန်သွား ခံ နေကြ တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကုန် ပြီ
တောက်ကျုပ် တရားလေး သမထလေး မတောက်တခေါက်လုပ်နေပြီ ဒါတောင် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတွေလူတွေ အကြောင်းဖတ်ရင် မျက်ရည်ကျကျလာတယ်။အားပေးလိုက်တယ် ဒါမင်းအဖေမဟုတ်ဘူး ခုတော့ထူးပါဘူး မျက်ရည်ဝဲလာတယ်။ကျုပ်အဖေဆို ဒီလိုမျက်ရည်ကျမှာဟုတ်ဘူး အတိတ်က သွားလေသော ဘိုးဘွားတွေ ပြန်စဉ်းစားကြည့် ကျဘူးနော် ခုကျတယ်။ထူးတော့ပါဘူး ဒါကျုပ် အဖေ အောင်ဆန်း ဒါကျုပ် အဖိုး အောင်ဆန်းဗျိ့ လို့မှတ်လိုက်ပြီ။
22 July 2011 at 03:34
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရတိုင်း ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီး ဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ ဝမ်းနည်းမိတယ်။ သူသာ လုပ်ကြံမခံရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးလည်း ဝင်မိတယ်။
အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေနိင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်း လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ နေရာမမှန်ရင်တောင် လူမှန်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် တိုးတက်နိင်ပါရဲ့။
ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်နေလို့ ဘာပြောရမှန်း